अमानवीय ब्यवहारगेर्न प्रहरीमाथी छानविन हुने –
अमानवीय ब्यवहारगेर्न प्रहरीमाथी छानविन हुने
ललितपुरको भैसेपाटीमा बच्चा बोकेकी एक महिलालाई प्रहरीले लाठी प्रहार गरेको भिडियो दुई दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भैरहेको छ ।
ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित नेपाली सेनाका पूर्वजर्नेल हेम खत्रीको घरअगाडि प्रहरीले महिलालाई कुटपिट गरेको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको हो ।
दृश्यमा प्रहरीले बच्चा बोकेकी महिलालाई पछाडीवाट लाठी प्रहार गरेको देखिएको छ ।महिलामाथि प्रहरी प्रभाग भैंसेपाटीमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक देवीप्रसाद पौडेलले लाठी प्रहार गरेका हुन । कुनै महिलालाई पक्राउ गर्नुपरेमा यथासम्भव महिला प्रहरीद्वारा पक्रन लगाउनुपर्ने भएपनि दृश्यमा पुरुष प्रहरीले बल प्रयोग देखिएको छ ।
ललितपुर प्रहरीले भने महिलाहरूले घरमा तोडफोड गर्न थालेपछि प्रहरीले भीड नियन्त्रणमा लिन बल प्रयोग गरेको जनाएको छ । एक महिला खत्रीसँग आफ्नो पुरानो सम्बन्ध रहेको तर उनले आफूलाई श्रीमती नस्वीकारेको भन्दै दलबल लिएर गएपछि सो घटना भएको बताइएको छ । यसअघि पनि महिलाले खत्रीको घरमा पुगेर समय समयमा विवाद गर्ने गरेको प्रहरीको भनाई छ ।।
« अमेरिका जाने सोचमा हुनुहुन्छ ? यसरी ठ,गीनुहोला साव*धान !
झुठ्ठा लान्छाना लगाई गालि बेइज्जती गरेको भन्दै गोकुल बाँस्कोटाले मुद्दा हाले »